XOG-Villa Somalia oo Ka Hortagtay Qorshe ay Wadeen Mucaaradku & Ciidamo La Diyaarshey.
February 10, 2019 puntlandnews
Puntlandnews.net (Garoowe)-Madaxtooyada Soomaaliya ayaa ka hortagtay qorshayaal mucaaradku ku abaabulayeen banaan baxyo ka dhan ah Shirka Shidaalka ee London oo Wasaaradda Batroolka Xukuumadda Soomaaliya ay soo qaban qaabisay.
Xubno waaweyn oo katirsan dhinacyada mucaaradka Mucaaradka ayaa ku fashilmay Abaabul ay ku doonayeen inay Banaanbax weyn ku qabtaan Muqdisho kadib Ciidamo ka tirsan Nabad sugida Soomaaliya oo qorshahaasi ka hortagay.
Xisbiyada Mucaaradka ee kasoo horjeeda Villa Somalia ayaa waday qorshe ay isugu keenayaan shacab kala duwan, iyagoo xeryaha Barakacayaasha ah kasoo aruurinayay Shacab Banaanbaxa sameeya laakiin Villa Somalia ayaa waddooyinka qaar xirtay, iyadoo su joogto ah ula socotay dhaq dhaqaaq kasta oo dibad bax lagu sameyn karay.
Siyaasiyiinta mucaaradka ah xildhibaannada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya iyo madaxdii horay ee soomaaliya soo hoggaamisay ayaa ka horyimid shirkaan iyaga oo sheegay in haatan aysan suurta gal ahayn in shidaalka Soomaaliya shirkado ajaanib ah ay xaraashaan arrintaanne ay keeni karto qalqal siyaasadeed iyo mid amniyeed intaba.
Madaxweyne Farmaajo ayaa si kulul u sheegay inay been abuur tahay wararka sheegaya in dano gaar ah loo adeegsanayo Xaraashka Soomaaliya Shidaalka, isagoo weerar Afka ah ku qaaday Siyaasiyiin uu ku tilmaamay ilaa 2000 soo waday inay hormarka Soomaaliya ka qeyb qaadanayey in Dalka dib udhac geliyaan.